ဇန်နဝါရီလ 2015 |2၏စာမျက်နှာ 17 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2015 » ဇန္နဝါရီလ (စာမျက်နှာ 2)
ယနေ့က Institut သားမွေးမှာ EBU နှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် AES အားဖြင့်ကျင်းပသည့် AES67 အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါစမ်းသပ်မှုအဖြစ်အပျက်ကိုပါဝင်ခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် Digigram - ဇန်နဝါရီ 27, 2015 - အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါစမ်းသပ်ခြင်းပွဲ AES67 နျ Standard Interconnection စံချိန်စံညွှန်း-အခြေပြုပစ္စည်းကိရိယာ MONTBONNOT, ပြင်သစ်အတွက်ရီးရဲလ် Gain ကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းသရုပ်ပြ နှောင်းပိုင်းတွင် 2014 အတွက်မြူးနစ်အတွက် Rundfunktechnik (IRT) ။ ဒီ "Plugfest" Digigram နှင့်အခြားရွေးချယ်ရန်ရောင်းချသူမှာ ...
ပဲရစ်, ပြင်သစ် - ဇန်နဝါရီ 28, 2015 - Dalet ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာစနစ်များ, မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများအဘို့အ software ကို-based ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဦးဆောင်ပေးသူ, ယနေ့က၎င်း၏အသစ်သောအွန်လိုင်းပညာရေးပလက်ဖောင်း, Dalet အကယ်ဒမီ၏ပစ်လွှတ်ကြေညာခဲ့သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့်နိူးထုတ်လွှင့်နှင့်မီဒီယာမှသူ့မှာအရမ်းကောင်းတဲ့, အ Dalet အကယ်ဒမီနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကိုသာဖြစ်ကြောင်းအကြောင်းအရာများ၏ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးကိုဖုံးလွှမ်းပေမယ့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆွေးနွေးကြမည် ...
Daniel S. McCOY, CAS ။ အသံထုတ်ကုန်များ ၆၆၄ ထုတ်လုပ်မှုရောနှောမှုကိုဖွင့်သည်
ကျယ်ပြန့်လမ်းကြောင်းများနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံစှမျးစုံစမ်းကြိုးတွင်လတ်တလောစီမံကိန်းများ Los Angeles ၏သတ်မှတ်မည်,, CA, ဇန်နဝါရီ 27, 2015 - ToneMesa, Inc ၏ပိုင်ရှင်နှင့်အော်ပရေတာ, Los Angeles မြို့အခြေစိုက်တည်နေရာနဲ့ Post-ထုတ်လုပ်မှုအသံကုမ္ပဏီ, ရောနှောဒံယလေက S နဲ့အမျှ ။ McCoy, CAS ။ , သူ့ client များ '' စီမံကိန်းများအတွက်ထူးခြားတဲ့သံကိုဖမ်းယူ၏အရေးပါမှုကိုနားလည်သည်။ ဒီအောင်မြင်ရန်အလို့ငှာ ...
Post ကို, အသံလွှင့်ခြင်းနှင့်အားကစားဆိုင်ရာများအတွက် EditShare သင်္ဘော Geevs7ဗီဒီယိုဆာဗာ
ဘော်စတွန်, MA - ဇန်နဝါရီ 27, 2015 - EditShare®, shared မီဒီယာသိုလှောင်မှုနဲ့အဆုံးမှအဆုံးသို့ tapeless လုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းချက်အတွက်နည်းပညာခေါင်းဆောင်, ယနေ့စားသုံးမိခြင်းနှင့်ပလေးအောက်ကိုဗီဒီယိုဆာဗာက၎င်း၏ Geevs အကွာအဝေး၏ဗားရှင်း7များလွှတ်ပေးရန်ကြေညာခဲ့သည်။ Geevs7EditShare ရဲ့ shared သိုလှောင်မှုနဲ့ Flow မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက်တွေနဲ့တိုးမြှင့်ပေါင်းစည်းမှုအပါအဝင်အသစ်သောအင်္ဂါရပ်များဟာ host ကထပ်ပြောသည်။ Tara Montford ...
Super Bowl XLIX ထုတ်လွှင့် RCS Gear ကို Up ကို
Super Bowl XLIX ၏မျှော်လင့်ခုနှစ်, Phoenix မြို့အားကစားကွင်းတက္ကသိုလ်မှဖေဖော်ဝါရီလ 24, 1 ဘို့စီစဉ်ထား, Reality စစ်ဆေးမှုစနစ် (RCS) 2015 ချထားလိုက်ပါတယ် - 24 RCS မိုဘိုင်း Workstation Gameday လွှမ်းခြုံ Burbank များအတွက် Dynamic တွင်-Air ကိုဂရစ်ဖစ်,, CA အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်အတွက်ကွင်းဆင်း Hit ဝေးလံခေါင်သီစတူဒီယိုရှိုး enliven တို့အားဤသို့သော DirecTV, ESPN နှင့် NFLN အဖြစ်ကွန်ရက်များရန်၎င်း၏မိုဘိုင်းဟာ့ဒ်ဝဲ / software ကိုဖြေရှင်းချက်၏ ...
သိမ်းယူမှု, Dynamic ကြော်ငြာ INSERT နှင့်အတူဆက်သွယ်ရေး '' အဆုံးမှအဆုံးသို့ဗီဒီယိုကိုဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်စွမ်းကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါပိုကောင်းစေပါတယ် Just-in-အချိန်ထုပ်ပိုးနှင့် Cloud DVR နည်းပညာဆက်သွယ်ရေး, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတီဗီကွန်ယက်ကိုအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ကြော်ငြာစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ဗီဒီယိုအခြေခံအဆောက်အဦများဖြေရှင်းချက်ထဲမှာစျေးကွက်ခေါင်းဆောင်မြင်ယောင်ကြည့်ပါ, ထုတ်လွှင့်စခန်းများ, Multichannel ဗီဒီယိုက programming ကိုဖြန့်ဖြူး, အစိုးရများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစျေးကွက်, က RGB ကွန်ယက်, Inc ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဆည်းပူးရန်သဘောတူညီထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ကြေညာလိုက်ပါတယ် ...
ဇန်နဝါရီလ 27, 2015 - ယနေ့ Orad င်း၏ဗီဒီယိုကမြို့ရိုးကိုဖြေရှင်းချက်အော်ပရေတာတစ်ဦးကို web browser ကနေသူတို့ရဲ့ HDVG ကဗီဒီယိုတင်ဆက်မှုအချက်ပြမှုများ၏အဆင်အပြင်ဖန်တီးသို့မဟုတ်တည်းဖြတ်ရန်ခွင့်ပြုတဲ့ Layout Configuration နှင့်အတူတိုးမြှင့်ခဲ့ကြကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။ အဆိုပါဖွဲ့စည်းမှုပုံစံအပြောင်းအလဲများဒီတော့အားလုံးပြောင်းလဲမှုများကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်အစစ်အမှန်အချိန်အတွက် updated နေကြသည်။ အဆိုပါ Layout Configuration အမြန် setup ကိုအဘို့အခွင့်ပြုထားခြင်းနှင့် ...
ခေတ်သစ် VideoFilm ရွှေကမ္ဘာလုံးအမည်စာရင်းတင်သွင်းအတွက် "အသက်စာစောင်" အရောင်တန်းနှင့်အယ်ဒီတာ့အာဘော်န်ဆောင်မှုများပေး
အကြီးတန်းကြီးကြပ် Colorist Dave ကိုးလ်ဘဝတစ်ဦးရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာကာတွန်းစွန့်စားမှုဆောင်ကြဉ်းကူညီရန်ဒါရိုက်တာ Jorge R. Gutierrez နှင့်အတူပူးပေါင်း။ BURBANK, 20th Century Fox နှင့် Reel FX Animation ရဲ့စတူဒီယိုအဘို့အ Calif. -နောက်ဆုံး post ကိုထုတ်လုပ်မှုအလုပ် '' အသက်စာစောင်, အကောင်းဆုံး Animated Feature ကိုရုပ်ရှင်ပွဲတော်များအတွက်ရွှေကမ္ဘာလုံးဆန်ခါတင်, မော်ဒန် VideoFilm မှာပြီးစီးခဲ့ခဲ့သည်။ လကြာကြိုးစားအားထုတ်မှုများအကြားတစ်ဦးပြင်းထန်သောပူးပေါင်းပါဝင် ...
2 ၏စာမျက်နှာ 17«12345 » 10...နောက်ဆုံး»